Iiraan: Haweenay Xijaabka Tuurtay oo xukun lagu ridey - BBC News Somali
Iiraan: Haweenay Xijaabka Tuurtay oo xukun lagu ridey
Lahaanshaha sawirka UNKNOWN
Image caption Bishii December, haweeney iska bixisay xijaabka magaalada Tehran ayaa astaan u noqotay dibadbaxyadii Iiraan
Haweeney u dhalatay dalka Iiraan oo goob fagaaro ah isaga bixisay Xijaabka si ay u muujiso cabasho ka dhan ah sharciga waajibka ka dhigaya xijaabka ayaa lagu xukumay laba sano oo xabsi ah, sida ay sheegeen dacwad oogayaasha.
Haweeneydani, oo aan magaceeda si rasmi ah loo shaacin ayaa lagu helay dambi ah "in ay dhiirigalinaysay akhlaaq xumo ", waxaa sidaasi sheegay dacwad soo oogahay Tehran Abbas Jafari-Dolatabadi.
Waxa uu intaa ku daray in 21 bilood oo ka mid ah xabsiga lagu xukumay la hakiyay sababtoo ah waxa ay u baahan tahay daawayn.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyay tira haween ah lagu xiray dalkaasi Iiraan.
Qaar badan oo ka mid ah haweenkan oo la xirey ka dib markii ay baalmareen sharciga dhigaya in marka ay goobaha fagaarayaasha ay imanaya ay xijaabtaan ayaa waxaa la siidaayay iyaga oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin.
Haweenaydan imika xukunka lagu riday ayaa la xiray saddex bilood ka hor iyada oo aan loo ogolaan in dammaanad lagu siidaayo.
Waxa ay u " baahan tahay daawayn muddo dheer ah waana in loo diraa dhakhtarka", ayuu yiri Mr Jafari-Dolatabadi.
Bishii December, haweeneey reer Iiraan ah oo la xiray ka dib markii ay xijaabka iska bixisay ka dibna inta ay ul surtay ay ku warfisay bartamaha Tehran ayaa astaan u noqotay dibadbaxyadii ka dhacay dalka Iiraan.
Siwirkeed ayaa waxa si wayn loogu baahiyay baraha bulshada.
Haweeneeydan ayaa markii dambe la siidaayay.
Tan iyo kacaankii Iiraan sanaddii 1979, ayaa waxa haweenka dalkaasi lagu qasbay in ay madaxa dataan sida uu dhigayo sharciga islamka.